Kachin Duwa: ဦးလှဆွေ ကို ဝေဖန်သံများ......
အဂ္ဂမဟာ မဏိဇောတဓရ သိကြားမင်း
အော် ဘယ်လိုလူတွေလဲဟ။ ဒုက္ခ ဒုက္ဂ
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှအမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှဆွေကKIAကိုအပြီးသတ် ချေမှုန်းပြီးမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သင့်ကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ တယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ဧရာဝတီကိုဒီညနေမှာ ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအကြားမှာလည်း ဗုံးကြဲချေမှုန်းပြီးမှ ချစ်ကြည်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ တဲ့အကြောင်း၊အလားတူပဲ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှာလည်း တမီလ်သူပုန်တွေကိုအစိုးရက အပြတ်ချေမှုန်းပြီးမှပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်ပုံတွေကို စစ်အရာရှိဟောင်းဖြစ်တဲ့ ဦးလှဆွေကဥပမာ ပေးပြီးဆွေးနွေးသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ အများစုကလည်း ဦးလှဆွေလိုပဲ သဘောထား တထပ်တည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။
Linn Htain, Daniel Zaw, Nayminn Thura and 26 others like this.
Kal Nuuzeke Nuuzeke ဟယ် . . . . . အံ့ပ . . .သြပ . . . . ဒါငါတို့နိုင်ငံရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲ့
Yesterday at 10:07pm via mobile · 4
Win Tun ဂေါင်မပါတယ်အမတ်တွေ့(588)ယောက်ရှိတဲ့အထဲ့မှာဘယ်နှစ် ယောက်လောက်ပါတလဲ့မသိဘူ
Yesterday at 10:08pm via mobile · 3
Kal Nuuzeke Nuuzeke ဖုရား . . . .ဖုရား
Yesterday at 10:08pm via mobile · 2
အဂ္ဂမဟာ မဏိဇောတဓရ သိကြားမင်း စစ်သွေးကြွ အဲလ်ကိုင်းဒါး အမတ်
Yesterday at 10:11pm via mobile · 5
Thanda Kyaw ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကယ်ဖို့ကုလားတွေကိုတကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးဆော်ပေးပါလား
Yesterday at 10:20pm · 4
Ko Kalar စစ်ဘီလူးတွေတိုင်းကျရှုံးတာပဲ
Yesterday at 10:26pm via mobile · 1
Nyan Linn ကျွန်တော့အမြင်ကတော့စစ်သွေးကြွလဲမရှိလက်ရှိအစိုးရကလုပ်ဆောင်နေတာကျမ္ဘာာဖျက်နိုင်လောက်တယ်မင်းတို့ လက်နက်ကဘယ်ကပန့် ပိုးတာလဲကျည်ကုန်ရင်အိမ်ပြန်အိပ်ကြရင်မကောင်းဘူးလားနောက်တန်းကသားမယားကိုကြည့် ပါဆိတ်တွေသတ်နွားတွေသတ်အူစိုရင်ဘ၀တွေမေ့နေတာလားတလစါလားတရက်စါလားသဘောပေါက်ဖို့ လိုပြီနော်။
Yesterday at 10:44pm · 1
Hawk Eye ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား စောက်ရူးများနှင့်ကခုန်ခြင်း .... အဲလေ ယောင်လို့ ဝိညာဉ်များနှင့် ကခုန်ခြင်း ......
Yesterday at 10:48pm via mobile · 2
Hawk Eye ငါတို့ ပြည်သူဘဏ္ဍာငွေတွေကို ထိုင်ဖြုန်းနေတဲ့ ကောင်တွေ .... ချီဦးနှောက်တွေ ... ဒီကောင်တွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ အရင်ချပြပေးရင် ငါတို့ ပြည်သူတွေက မင်းတို့ပြောတဲ့ကိစ္စ သဘောတူပေးမယ် ... အလကား ဆန်ကုန်မြေလေးတွေ ...
Yesterday at 10:52pm via mobile · 4
Nyan Linn ခွေးသားဝက်မြည်းနွားယောက်ဖအဖေခေါ်တရုပ်မြန်မာပြည်ရောင်းစါးမိသားစုမတရားဝမှဟောင်နေတဲ့ ကောင်ကုန်ပါပြီမင်းတို့ အမေတွေနှမတွေပြန်လည်တရုပ်ကိုအကြွေးဆပ်ပါအုံးဒါဘဲဟေ့ကောင်စစ်တပ်ထဲမှာငါ့ ညီတွေရှိတယ်မင်းတို့ လောက်အောက်တန်းမကျဘူးကွစါးနိုင်သောက်နိုင်တယ်သူတောင်းစါးဆိူတော့ဟောင်တယ်ကိုက်တယ်ဒါလဲဘ၀သံသရာဘဲပေါ့ လူစိတ်မရှိတဲ့ နွားတွေသိစေချင်ပါသည်။
Yesterday at 10:57pm · 2
လရောင် သာ စစ်သားတွေ က KIA, ရဲ့ ဒဏ်ကို အလူး
Yesterday at 10:58pm via mobile · 2
Ko Moe San လလလလလလလလလလလဘဘ
Yesterday at 11:13pm via mobile
လရောင် သဲာအသိတယောက်ရဲ့ တူလေး ကချင်
မှာ ရိက္ခာတင်တဲ့ ယာဉ် မှာပါတာ KIAကိုတိုက်ခိုက်လို့ ကျည်ဆံ မှန်ပြီး ဒီနေ့မှ
Yesterday at 11:40pm via mobile · 2
Nyan Linn စိတ်မကောင်ပါဘူးဒီလိုတွေဖြစ်နေတာအားလုံးတာဝန်တွေရျိပါတယ်အဒီကကစစ်အစိုးရဘဲယခင်လူတွေေ၇ာင်းစါးလို့ ကုန်တော့ဒီစါခွက်ဘဲနှိုက်နေတာရေနံလဲခရိုနီဘဲကျောက်စိန်းလဲ .သစ်လဲ.အများကြီးပါပြောရင်မိုးလင်းနေလိပ်မယ်...ခွက်လုနေတာပါ။
Kg Thent ဟေ့ဆရာမလေး ဒီနားမှာထိုင်နေတဲ့ငါလူနာတွေဘယ်ရောက်သွားတုန်း ဟို ဆရာလူနာတွေအချိန်မရတော့လို့တဲ့ဆရာ့ကိုမစောင့်ဘဲလွှတ်တော်တက်ဖို့သွားကြပြီ
Ukan Kaung ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲလားအကြမ်းဖက်ဆွေးနွေးပွဲလား?
သူပုန်ကောင် ဒူဝါဆိုတဲ့ကောင် မင်းက KIA သူပုန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ လစာကိုစားပြီးတော့ မဟုတ်တမ်း သတင်းတွေနဲ့ လွင့်မနေနဲ့ ။ စီးပွားရှာချင်ရင် ရိုးရိုးသားသားရှာ ။ နိုင်ငံတော်ကို ဖြိုကွဲထွက်ချင်တဲ့ သူပုန်အားပေး မလုပ်နဲ့ ။ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတတ်ချင်ရင် နည်းပညာရှိအောင်လုပ် စာကြိုးစား ။ စက်ရုံတွေဆောက် လမ်းတွေဖောက် ပေ့ါ့ ။ ခုလိုလက်နက်ကိုင်ပြီး သူတောင်းစား ဓါးမြ လုပ်နေစရာမလိုဘူး ။ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတတ်ရေးကိုပဲ အကြောင်းပြပြီး ကုမဏ္ဏိတွေ ကျေးရွာတွေ ဈေးဆိုင်တွေ ဆက်ကြေးကောက်နေတဲ့ကောင် ။
ဘုရင့်နောင် January 27, 2013 at 11:32 AM
Anonymous ဆိုတဲ့ အဖေအမေ မပေါ်ပဲ နာမည်တောင် မဖေါ်ရဲတဲ့ကောင်။
ပြည်မသောင်းကျန်းသူတွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်နေတဲ့ကောင်။
မင်းတို့ဆက်ကြေးကိုတော့ အခွန် အကောက်ခွန် အမတော်ကြေး အလှူငွေ သဒ္ဒါကြေးနဲ့ နာမည်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ဒမြတိုက်နေတာကို ဘယ်သူမှ မသိဘူးလို့တော့ မအောက်မေ့လိုက်နဲ့။
ငါ့လို မြန်မာပြည် အောက်ဖျားမှာ နေတဲ့သူတောင် ကေအိုင်အေအစိုးရ ဘာတွေကောင်းတာလုပ်လဲ သိသေးတယ် ၊ မင်းလိုကောင်ကသာ မျက်စေ့မှိတ်ထားတာ။ ကချင်လည်းလူ ရှမ်းလည်းလူ ကရင်လည်းလူကွ။ မင်းတို့ချည်း အားလုံးလုပ်တတ်တယ် မထင်နဲ့။ သမိုင်းတောင်မရှိပဲ သူများကိုလိုက်ပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်တာ ရှက်တတ်စမ်းပါ။